Qiyaasta Suuqgeynta ee Muhiimka ah | Martech Zone
Talaado, Janaayo 21, 2014 Douglas Karr
Cafis ayaa tan isku keenay xaashida qiyamka suuq geynta taasi ayaa sameysay ka wareeg.
Suuqgeynta maanta Analytics waa awood badan yihiin. Suuqyayaashu waxay marin u heli karaan dhammaan noocyada cabbiraadaha, laga soo bilaabo aragtida bogga iyo tirooyinka taageerayaasha illaa tirakoobyo badan oo muujinaya oo ku lug leh hoggaamiyeyaasha iyo iibka. Iyada oo daahfurnaanta sii kordheysa ee macluumaadka suuqgeynta, ay fududahay in lagu qabsado xog - inbadan oo aan ahayn - run ahaantii saameyn kuma yeelaneyso dakhligaaga. Suuqyayaashu waxay u baahan yihiin inay diiradda saaraan cabbiraadaha tilmaamaha wanaagsan ka bixinaya iibka iyo guusha suuqgeynta. via Pardot
Waxaan ka qabaa xoogaa walaac ah qaar ka mid ah cabbiraadaha. Tusaale ahaan, ma arko dood ku saabsan qiimaha macaamiil kasta ama macaamil ku haynta. Markaan fiirineyno inaan kobcinno suuqgeynta emaylka - tusaale ahaan - waxaan u baahannahay inaan fahanno xaddidnaanta iyo xajinta heerka liistada macaamiisheena. Waxaan aragnaa inta udhaxeysa 3% iyo 5% ee liiskayaga oo isbedelaya usbuuc kasta markay dadku ka tagaan shaqooyinka ama ay badalaan cinwaanada emaylka. Taasi waxay ka dhigan tahay in si loo sii wado kobcinta saldhiggeena macaamiisha, waa inaan si firfircoon kor ugu qaadno oo aan uga gudubno cilladdaas. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan daawano isbedel kasta oo la taaban karo oo ku yimaada heerka haynta… haddii tiro yar oo macaamiil ah ay doortaan, waxaa laga yaabaa inaan u baahanahay inaan dib uga fikirno istiraatiijiyad emailkayaga.
La'aanta qiyaasta tartanka waa mid cabsi leh sidoo kale. Waxaan badanaaba aragnaa macaamiisha oo jajabaya markay istaatistikoodu hoos u dhacdo - laakiin mararka qaarkood xilliyada ayaa saameyn ku leh qof walba macaamiisheenuna wali waxay kordhinayaan saamigooda suuqa. Waxaa jira cabirro aad u tiro yar oo muhiim ah (iyo kanaalada suuqgeynta ee muhiimka ah)… laakiin waxaan qiyaasayaa inay tani tahay bilow wanaagsan.
Tags: booska xayeysiintaheerka cigtadhagsii si aad uhogaamisoheerka-riixheshiisyo xirankharashka helitaan kastaqiimaha riixakharashka halkii horseedctrheerka gaarsiintaraacsansaaxiibadaaDareenkatayada Leadraadadraadadka la soo saaraycabirrada suuqgeyntaheerka furancafispostsdhaqanka wax iibsigagudbintaretweetssaamiyadawadaagista stats